DeMarker GF Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha DeMarker GF Forex Tusiyaha
DeMarker GF Forex Tusiyaha
By Vincent Koh -
DeMarker GF Forex Tusiyaha waa aalad runtii wax ku ool ah oo awood leh ganacsi Forex. Waa sidaas dabacsan in aad ku ganacsan kartaa wax kasta oo laba laba lacag ah oo ku saabsan wax kasta oo waqti in nooc kasta oo ka mid ah xaaladaha suuqa. In erayo kale, nidaamka DeMarker GF shaqeeya Daalacanayo sidoo kale ka bilowda suuqyada. DeMarker GF lahayn ku jira tilmaame kasta oo ku saabsan suuqa kala weyn shaxda laakiin waxa ay ka kooban tahay tilmaame loo yaqaan 'Cronex T DeMarker' on suuqa kala tilmaanta. Cronex T DeMarker waa tilmaame gaar ah loogu farsamo taas oo run ahaantii waa isku dar ah noocyo kala duwan ah oo kale oo ka mid ah tilmaamayaasha. Cronex T DeMarker inta badan ka kooban tahay saddex qaybood; histogaraam, celceliska socdaa iyo fallaadho. guuro histogaraam geyiga togan iyo kuwa taban. Waxaa ka mid ah laba oscillators mid u eg yahay RSI oo midba midka kale waa sida celceliska socdaa. Si kastaba ha ahaatee, muhiim ma aha in ay diiradda saaraan tilmaamayaasha oo dhan, kaliya oo diiradda saaraya kuwa fallaadho buluug iyo casaan waa ku filan si ay u sameeyaan go'aano ganacsi oo la isticmaalayo nidaamka ganacsi Forex DeMarker GF.
Inkastoo nidaamka waa dabacsan ganacsiga on kasta oo waqti, waa inaad ka taxadartaa on dhinacyada qaar ka mid ah si ay ganacsi faa'iido. Waa in aad si taxaddar leh oo dheeraad ah marka aad ku ganacsan in waqtiga yar sida hal daqiiqo iyo 5 daqiiqo. Waa inaad ka fogaataa ganacsi lagu jiro news dhacdo sare si looga hortago Degenaansho daran taasoo keeni karta in aad joogsato in ay kiciyaan oo haddii aad ganacsigaagu in waqtiga yar.
Marka DeMarker GF si sax ah lagu rakibay on boosteejo ganacsi aad shaxda ganacsiga waa in sidan u eg:
Sida aad ka arki kartaa kor fallaadhihii buluug iyo casaan idin tusiyo waqtiga saxda ah in la iibsado iyo iibiyaan labada ciyaaryahan lacagta. Waa in aad ka iibsan marka arrow isku dari kara a muuqataa on tilmaame Cronex T DeMarker GF iyo iska iibiso marka arrow cas u muuqataa.
Habka ugu fiican ee ku ganacsan la isticmaalayo nidaamka this waa ay gartaan jihada ay arrimuhu waaweyn oo keliya qaadashada xirfadaha jihada in. In erayo kale, waa in aad qaadato oo keliya jagooyinka dheer uptrend iyo jagooyinka kaliya gaaban ee downtrend.
Gadashada Xaaladaha Isticmaalka DeMarker GF.
arrimuhu Major waa in ay kor u.
arrow Blue waa muuqdaan on suuqa kala tilmaanta.
Fur meel dheer marka kor xaaladaha waxaa la kulmay.
Dhig stop kaliya hoos ku yar yahay lulid dhawaan.
Qaado faa'iido markii arrow cas u muuqataa on suuqa kala tilmaanta.
Iibinta Xaaladaha Isticmaalka DeMarker GF.
arrimuhu Major waa in ay hoos u.
arrow Red waa muuqdaan on suuqa kala tilmaanta.
Fur meel gaaban marka kor xaaladaha waxaa la kulmay.
Dhig stop kaliya kor ku xusan lulid dhawaan sare.
Qaado faa'iido markii arrow buluug u muuqataa on suuqa kala tilmaanta.
DeMarker GF Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
DeMarker GF Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo DeMarker GF Forex Indicator.mq4?
Download DeMarker GF Forex Indicator.mq4
Copy DeMarker GF Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on DeMarker GF Forex Indicator.mq4
Tusiyaha DeMarker GF Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar DeMarker GF Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousMACD Shumac V3 Forex Tusiyaha
Next articleVoltyChannel Stop Forex Tusiyaha